ကို C စီးရီး 280w လမ်းမီးအိမ် - Mic LED
နေအိမ်> ထုတ်ကုန်များ> LED မီးအလင်း> ကို C စီးရီးလမ်းအလင်း> C Series 280w Street Lamp
တစ်သက်တာမီးအိမ်:> 50, 000 နာရီ
IP အဆင့် IP65
Prev: ယခင်စာမျက်နှာမရှိပါ ယခုကိုးကားပါ နောက်တစ်ခု
1. The use of the whole aluminum lamp cooling technology, perfect and efficient solution to the problem of LED cooling,alarge range of light sources.
2. Anti-dust and anti-staying water design, reduce the maintenance of cleaning up the pressure, suitable for the outdoor environment.
IP65 ၏ 4. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်ကို။
5. ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် anodizing ၏5shell ကို, ခိုင်ခံ့သောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
လမ်းဘေးများ၊ မြို့ပြလမ်းများ၊ တံတားများ၊ လမ်းဘေးစင်္ကြံများနှင့်အခြားလမ်းမီးများစတုရန်းမိုင်၊ ကျောင်းများ၊ လူနေအိမ်ရာနေရာများ၊ စက်မှုဇုန်များ၊ ပန်းခြံများနှင့်အခြားအပြင်ဘက်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
LED အရေအတွက် 192pcs
Luminous LED 130-140lm / w, 1W / PC ကို, 350mA
စွမ်းအင်ထိရောက်မှု > 90%
input ဗို့အား AC85-265V, 50-60Hz / DC24
Lumen > 28000lm
တောက်ပသောမီးခွက် > 100lm / w
အော် > ၈၀
အရောင်အပူချိန် ပူနွေးသောအဖြူရောင် (2700-3500k)
Beam ပုံစံ Rectangular ရောင်ခြည်
Beam ထောင့် အလျားလိုက်ဝင်ရိုးတန်း： 120 °, ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးတန်း： 60 °
မီးအိမ်ပစ္စည်း Die- Casting လူမီနီယံ + Optical မှန်ဘီလူး
မီးခွက်သက်တမ်း > 50, 000Hours